Global Voices teny Malagasy · admin – Oktobra 2018
admin · Oktobra, 2018
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Oktobra, 2018
Mpanoratra Deborah Ann Dilley · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Manoratra momba ny Sinema ireo bilaogera Iraniana
Ny sarimihetsika Iraniana no nahazo loka tamin'ny fetibe nandritra ny taona maro. Misaotra ireo talen'ny sarimihetsika tahaka an'i Kiarostami, Panahi, Majidi, ... Afaka mirehareha amin'ny sarimihetsikany ny Iraniana.
Pakistan: Sazin'ny bilaogy
Mpanoratra Omer Alvie · Azia Atsimo
Ny "sazy iombonana" dia lamaody fialantsiny vaovao ampiasain'ireo governemanta eran-tany. Na amin'ny fandraràna ny blaogy izany na manapoaka baomba amin'ireo olon-tsotra tsy manan-tsiny, ny "sazy iombonana" dia toa fitaovana "safidy" amin'ireo fitaovana eo amin'ny fahefana.
Mitendry milina i Torkia (febroary 2006)….
Eny, tafaverina ny fitsidihana an'i Torkia taorian'ny fiatoana lavalava, ary satria efa ela izay, dia tsy misy ny fomba feno hitantarana izay lazain'ny rehetra, noho izany dia hifantoka amin'ny misongadina isika. Aleo mba ho tratran'ny namantsika kely isika, sa ahoana?
Avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Jordaniana
Mpanoratra Roba Al Assi · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Tezitra tamin'ny fanafihana ny Toerana masina Askariya ireo Silamo, indrindra fa ny Shitta, manamarika ny ireo bilaogera Jordaniana, mampitaha ny fihetsika tsy misy dikany nataon'ireo Miozolomana manoloana ny tsy fahombiazan'ny sariitatra Danoà amin'ny apartheid (fanavakavaham-bolon-koditra) ankehitriny mahazo ny moske 1200 taona ny sasany tamin'izy ireo.
Mpanoratra Farah Kinani · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Tena mavitrika tokoa ny herinandro lasa teo tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Maraokana ary mitohy ny adihevitra mikasika ireo lohahevitra samihafa, ary tena mahaliana. Niresaka momba ny loza farany tamin'ny hajj, ankoatry ny lohahevitra hafa ireo bilaogera Maraokana. Niresaka momba ny Fatwa vao haingana ihany koa izy ireo.
24 Oktobra 2018
Mpanoratra Zimpundit · Afrika Mainty
Dia fitetezana ny tontolon'ny bilaogy Kiorda
Araka ny notaterin'ny Kurdistan Blog Count, tsikaritra ireo bilaogy Kiorda vaovao maromaro amin'ny teny Anglisy.
Manodidina an'i Kambodza miaraka amin'ny Olom-pirenena nomerika
Mpanoratra Tharum Bun · Kambodza
Niteraka tantara sy lohatenim-baovao ny fahatapahan'ny herinaratra tany Etazonia tamin'ny taona 2003, fa tsy izany tany Kambodza. Tao Stung Treng, raha nanoratra mailaka tao amin'ny foibem-pifandraisana aterineto iray, dia tsy afaka namita izany ny mpiasa iray mpandrindra solosaina satria lany lasantsy ny milina manome herinaratra sy mampandeha ny solosaina.
Ny tontolon'ny bilaogin'ny vehivavy Afrikanina amin'ity herinandro ity (2006)
Mpanoratra Nish Matenjwa · Afrika Mainty
Mibilaogy momba ny mosary any Kenya ny vehivavy bilaogera Kenyana sasany izay milaza ny governemanta fa olona 4 tapitrisa no mila fanampiana ara-tsakafo.